လက်ဝတ်ရတနာများအတွက် Mini Welder နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိထားရမယ့်အရာများ Taiwan မှ လက်ဝတ်ရတနာများအတွက် Mini Welder ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊
ကြေးစားထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်ပြည်ပပို့ကုန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွမ်းထက်ဖြန့်ဖြူးသောကွန်ယက်မှကျေးဇူးတင်စကား, ငါတို့၏ လက်ဝတ်ရတနာများအတွက် Mini Welder ထုတ်ကုန်အတွက်ဖောက်သည်တွေနဲ့လူကြိုက်များ Taiwan။ လျင်မြန်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူကျနော်တို့ ISO9001 အောင်လက်မှတ်မှီများနှင့်ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့အမည်အနိုင်ရထားပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ကိုအကြောင်းပိုမိုကျေးဇူးပြုပြီးသင်ယူဖို့ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ မည်သည့်အချိန်တွင်မ။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူကောင်းတစ်ဦးနှင့်ရေရှည်စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးကတည်ထောင်ဖို့မျှော်ကြည့်ရှုပါ။
ပုံစံ - OPT-JW100
အပူဒဏ်ခံရသောဇုန်သည်သေးငယ်သည်,welding spot size ကိုချိန်ညှိနိုင်သည်,welding spot သည်ပြားချပ်ချပ်နှင့်လှပသည်,အလွန်အကျွံတင်ရန်မလိုပါ-ဂဟေကုသမှု.
ဂဟေဆော်နှုန်းမြန်သည်,အရည်အသွေးမြင့်မားသော,မဟုတ်-ဂဟေဆက်အဆစ်များကိုညစ်ညမ်းစေသည်,တိကျသောတည်နေရာ,ဂဟေဆော်နေစဉ်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိရတနာများကိုထိခိုက်မှုမရှိပါ.
မျက်နှာပြင်သည် ၇ လက်မ LED မျက်နှာပြင်ကိုအသုံးပြုသည်,တရုတ်တွေနဲ့,အင်္ဂလိပ်,ရုရှား,စပိန်နှင့်အခြားဘာသာစကားများ,လေမှုတ်ကာကွယ်သည့်ကိရိယာနှင့်
CCD စောင့်ကြည့်မှုစနစ်ကို 10X microscope ပေါ်တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်.
စိတ်ကြိုက် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးနိုင်သည်.
Spot Size Adjustment Range:0.1-၃ မီလီမီတာ
စက်အတိုင်းအတာ:၅၁၀ x ၂၉၀ x ၂၈၀ မီလီမီတာ
အသုံးချနိုင်သောပစ္စည်းများ:ရွှေ,ငွေ,ပလက်တီနမ်,အစွန်းခံသံမဏိ,တိုက်တေနီယမ်,အခြားသတ္တုများနှင့်၎င်းတို့၏သတ္တုစပ်များ.ရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာများတွင်တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်,လက်စွပ်,ဆွဲကြိုး,လက်ကောက်,လည်ဆွဲများ,တွင်း,spot welding brazing သည်,ချုပ်ရိုးများနှင့် mosaic အစိတ်အပိုင်းများ၏ claw အစိတ်အပိုင်းများကိုဂဟေဆော်ခြင်းကိုပြုပြင်ပါ,စသည်တို့.,အတုအံသွားသဲများနှင့်သေးငယ်သောတိကျသောအစိတ်အပိုင်းများကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်(ကဲ့သို့:inheritance နးခဲသည်,နာရီနွေ ဦး,kinescope,အီလက်ထရွန်သေနတ်ပရိသ,စသည်တို့.)
ကြာမြင့်ချိန်:ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်အလုပ်လုပ်ရက်ပေါင်း 60 ခန့်
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cnclathemachine.com.tw/my/mini-welder-for-jewelry.html
အကောင်းဆုံး လက်ဝတ်ရတနာများအတွက် Mini Welder ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် လက်ဝတ်ရတနာများအတွက် Mini Welder မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ